Kutenda netsanga yembeu | Apg29
Kutenda netsanga yembeu
Tingaitei kuitawo mamwe kutenda, kurei uye kutenda?
Panewo dzakawanda pakati pevanhu vaMwari vane mafungiro kuti kutenda kwakasimba chinhu utopian uye musimbise. Asi kwete ndizvozvo zvose. Tichaona muRugwaro kuti anoratidza kutenda chii.
The Bible rinotaura kakawanda ezvokutenda uye kudiwa kutora kutenda. VaKristu vakawanda vanoda kutenda kwavo kukura, saka kuti kutenda anowana vakakura uye kusimba. It ingangodaro kuona izvozvo.
Panewo dzakawanda pakati pevanhu vaMwari vane mafungiro kuti kutenda kwakasimba chinhu utopian uye musimbise. Asi kwete ndizvozvo zvose. Tichaona muRugwaro kuti anoratidza kutenda chii. Tinoverenga KJV, vaHebheru. 11: 1:
"Asi kutenda nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa, umbowo hwezvinhu zvisingaonekwi."
Faith haasi kubvuma, ane mafungiro kana uchitarisira kuti munhu haasi paigona. Faith ane chokuita mumuviri pfungwa, sei tinoona zvinhu mupfungwa dzedu.
Kazhinji tinoti: "Ndinofunga kuti zviri chakadeno, asi handisi chokwadi." Hoyo nokufungidzira, zvichida fungidziro kana zvokufungidzira. Kutenda chinhu chakasiyana zvachose, chimwe chinhu chakasimba, zvachose vakachengeteka. Kutenda kuvimba nezvipikirwa zvaMwari uye chivimbo chokwadi chii chisingaoneki. Mundima 3 inoti ichi:
"Nokutenda tinonzwisisa kuti zvose zvakasikwa neshoko raMwari, zvekuti zvinhu hauna kubva zvatinogona kuona."
Nokutenda kuwana nzwisiso uye kunzwisisa. Mumwe anonzwisisa nokutenda. Faith kunopfuura nyika kuti kunoonekwa kuti ziso uye inosvika chokwadi shure chepanyika. Tinoverenga kuti: "Nokutenda tinonzwisisa." Ndicho chokwadi. Asi vasingapfidzi vanhu vari kutendeukira kuna zvose, uye anoti: "Vatungamirirwa pfungwa, tinotenda." Zviri rakavapo mumuviri pfungwa uye vanhuwo "pfungwa".
Tingaitei kuitawo mamwe kutenda, kurei uye kutenda? The Bible rinoti:
"Kutenda kunouya nokunzwa neshoko raMwari."
Faith kunouya kana tichiteerera dzidziso yeBhaibheri panguva inopfekwa muparidzi ane zvakadzama tinzwisise shoko raMwari. Faith zvakare rwunouya kakawanda kuverenga Bhaibheri iri kutungamirirwa Mutsvene. Kuzodzwa The Mutsvene uri nokure yakanakisisa Bible mudzidzisi. Pakuverengwa Shoko, zvakakosha pfungwa kunyanya zvipikirwa, nokuti Mwari akati, ndivo iye, uye akavimbisa Muruvoko. Unofanira here kuomerera zvipikirwa zviri muBhaibheri, nokuti isu kutakura.
Abrahamu aiva murume aiva nokutenda kwakasimba. Mwari akanga amupa chipikirwa mwanakomana, raiva zvipenyu chisingabviri. Asi aikwanisa kuona zvisingaiti uye vachiri kudavira kuti zvakanga zvachose zvinobvira. Tinoverenga verbatim kubva nuBibeln, Rome. 4: 18-22:
18 "Kunyange paiva pasina tariro, Abhurahama netariro zvakadaro uye kufunga, uye saka akabereka ndiye baba vendudzi zhinji, sezvo zvakanzi, 'Saka vazhinji vachava vana vako kuva.'
19 Naizvozvo Abrahamu haana vakadzungairira kutenda kwavo, kunyange zvazvo akanga ava nemakore zana uye akafunga kuti muviri wake wakanga asina simba, uye kunyange zvazvo wake Sara vakanga kumbobvira kukwanisa kuva nevana, uye zvino yakanga chete zvakare.
20 Iye haana kumbopikisa mukusatenda panguva chivimbiso chaMwari, nokuti kutenda kwake akamupa simba, uye iye achakudzwa Mwari.
21 Aiva nechokwadi chokuti Mwari anogona kuita chero zvaakavimbisa,
22 uye zvikanzi kwaari ndiko kururama. "
Kana tikatora Abrahama somuenzaniso, tinoona akakomborerwa mukana yaikura kutenda. Muna 1917 shanduro inoti:
"... akanga asi akasimba mukutenda kwavo; achipa rumbidzo kuna Mwari ... "
To rukudzo Mwari inzira kuwana kutenda kwakasimba. Asi zvino kubwinya kwaIshe munzira yakarurama. Haukwanisi kuita zvinotaurwa naIsaya. 29:13 (nuBibeln):
"Vanhu ava vanoswedera kwandiri nemiromo yavo, uye vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni, uye kutya kwavo Mwari chete vakadzidza nevanhu."
Totaura mwoyo rinobatanidzwa kukudza Mwari noupenyu hwake, nepfungwa, mazwi nezviito. It Abrahamu.
Pane imwe nguva vadzidzi vakabvunza Jesu kuparadzira kutenda kwavo. "Tiwedzereiwo kutenda kwedu," vakadaro. Jesu akavapindura, Matt. 17:20:
"... Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana mune rutendo rwakaita setsanga yemasitadhi, munogona kuti kugomo iri, Ibva pano uende apo, uye kuchaita. Uye hapana chinhu chamuchatadza kwauri"
Hapana ari akavimbisa muShoko raMwari, kana kuti kubatsira vana vaMwari hazvibviri kune vaya vane kutenda kuduku setsanga yemasitadhi. Kutenda kwechokwadi vanovimba yose mushoko raMwari rakaziviswa uye kuda kwake.
Jesu akapa chipikirwa chinoshamisa mu John. 14:12
"Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, uyo anotenda mandiri, iyewo achaita mabasa andinoita;. Uye mabasa makuru pane aya achaita, nekuti ini ndinoenda kuna Baba vangu"
Izvi zvinoreva kuti havana zvinogoneka vose vane kutenda kwechokwadi muna Jesu kuti vaite mabasa iye, uye rakatokura kupfuura zvaakaita. Ko munhu pakuva, chinhu musimbise? Kwete napaduku! Nokuteerera huzere noMweya vaparidzi achidzidzisa uye kushingaira kuverenga uye Shoko kudzidza raMwari anogona kubatsirwa kudavira izvozvo.